DAAWO-Baarlamaanka oo cod aqlabiyad leh ku meel mariyey sameynta guddi Baarlamaanni ah oo la dagaalamma Musuq Maasuqa – Radio Muqdisho
DAAWO-Baarlamaanka oo cod aqlabiyad leh ku meel mariyey sameynta guddi Baarlamaanni ah oo la dagaalamma Musuq Maasuqa
Xildhibaanada baarlamanka Somalia ayaa maanta go’aamiyay in la sameeyo guddi Baarlamaani ah oo la dagalama musuqa ayagoo dhanka kale guda galay aqrintii labaad ee hindise sharciyeedka Hantidhowrka guud ee Qaranka.
Mudanayaasha Baarlamaanka Federaalka ah ee Soomaaliya oo kulan ku yeeshay xarunta Golaha Shacabka ee magaalada Muqdisho ayaa ka Dooday akhrinta labaad ee Hindise sharciyeedka Hanti dhowrka Qaranka, iyadoo Xildhibaannadu ay ka hadleen argtidooda ku aadan wax ka badal iyo wax ku kordhin intaba.
Guddoomiyaha Baarlamaanka Soomaaliya mudane maxamad Sheekh Cusmaan jawaari oo ka hadlay kulanka maanta ayaa ugu Horeen xildhibaanada u sheegay.
“Ra’iisul wasaaraha Xukuumadda waxa uu baarlamaanka Soo weydiistay in xukumadiisa la horkeeno sagaal iyo tobanka bishaan, wada hadal dheer ka dib waxaan isla qaadanay in golaha xukuumadda Baarlamaanka la horkeeno toban iyo todobada Bishaan illaa iyo hada wax jawaab ah kama helin Ra’iisul wasaaraha maadaama shaqo badan ay inoo taal waxaan qaadanay in maalinta sabdiga ah la keeno xukuumadda” ayuu yiri Guddoomiye jawaari
Soo jeedinta Gudoomiyaha Baarlamaanka kadib waxaa Xildhibaanno ka tirsan Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ay soo jeediyeen in la sameeyo guddi Baarlamaani ah oo la dagaalama musuq maasuqa waxaana soo jeedintaasi uu Guddoonku ka dalbaday Xildhibaannada iney codkooda ka dhiibtaan waxaana ogolaatay sameynta guddi hoosaadka ilaalinta Xasiloonnida Baarlamaanka iyo la dagaalanka musuq maasuqa 161 Xildhibaan,Seddex xildhibaanna waa ay diideen halka hal Xildhibaanna uu ka aamusay sida uu Afhayeenka Baarlamaanka ku shaaciyey natiijada.
Dhinaca kale Xildhibaannada Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya waxa ay maanta kulankooda ku gudagaleen akhrinta labaad ee Hindise Sharciyeedka Hanti dhowrka guud ee Qaranka ayadoo Guddiga Maalliyadda ee Baarlamaankana ay Xildhibaannada hor keeneen warbixintooda ku aadan waxyaabihii ay kasoo bedeleen Hindise Sharciyeedkan.
Maallinnimada berrito ah ayey Xildhinaannadu sii amba qaadi doonaan akhrinta Labaad ee Hindise Sharciyeedka Hanti Dhowrka guud ee Qaranka halka maalinnimada sabtida ahna la filayo iney Xildhibaannada gudagalaan kalsooni siinta Xukuummadda cusub ee uu soo dhisay Ra’isulwasaare Cumar C/rashiid Cali Sharma’arke.
Islaamka iyo Garsoorka